बमजनको बेडरुममा के भेटियो यस्तो, प्रहरी परो चकित,बमजनको आश्रममा के देखियो ? जस्ताको त्यस्तै, तथ्य बाहिरएपछी प्रहरी पनि चकित…(हेर्नुहोस् भिडियो) – Online Palanchok
बमजनको बेडरुममा के भेटियो यस्तो, प्रहरी परो चकित,बमजनको आश्रममा के देखियो ? जस्ताको त्यस्तै, तथ्य बाहिरएपछी प्रहरी पनि चकित…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडाै‌ – सञ्चलाल सहित ३ आनी बेपत्ता पारेका आरोपी रामबहादुर बम्जनको आश्रममा आउजाउ गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको बाडेगाउँस्थित जंगलको आश्रम क्षेत्रमा अनुयायीबाहेक कसैले जान पाउँदैनन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। शुक्रबारदेखि अनुसन्धानमा व्यस्त सीआईबी फोरेन्सी विज्ञ सहितको प्रहरी टोलीले आइतबार आश्रमभन्दा ३ सय मिटर पर तरकारी बारीमा १५ फिट गहिरो शंकास्पद स्थान उत्खनन् गर्दा आठ वटा नुनको खोल र कोइलाको अवशेष बरामद गरेको थियो । ‘त्यसपछि आश्रमस्थलमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ इन्द्रावती गाउँपालिका बाडेगाउँका लक्ष्मण थापाले भने।
पहिले पनि आश्रममा संघका सदस्य या अनुयायीबाहेक अरूलाई जान दिइएको थिएन। त्यहाँको गतिविधिबारे ध्यानमा बिघ्न पर्ने जानकारी दिइन्थ्यो। बीचमा प्रहरीले अनुसन्धानमा राखेपछि आश्रमबाट कसैलाई आउन रोक लगाएको छ। तीनदिने अनुसन्धान सकेर पाएको नुन मिसिएको माटोसँगै छेउमा प्राप्त कोइलाबारे परीक्षण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘१५ फिट गहिरो खनिसकेपछि पत्रेढुंगासहित नुनको खोल र कोइला अवशेष फेला पर्‍यो, त्यसको परीक्षणसँगै थप अनुसन्धान भइरहेको छ । बमजनको आश्रममा के देखियो ? जस्ताको त्यस्तै, तथ्य बाहिरएपछी प्रहरी पनि चकित…हेर्नुहोस् भिडियो…
Prev“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल पुष २६ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
Nextविदेशवाट आउँदा ठूलै झिटीगुन्टा ल्याउने प्लानमा हुनुहुन्छ भने होसियार ! तपाईले यस्ता समान बोकेर आउनु भयो भने विमानस्थलमा सिधै जफत हुने छ ! सक्दो शेयर गरि सबैलाई दुख गरि कमाएर ल्याएको आफ्नो समान जफत हुन्बाट जोगाउनुहोस
बिदेशी एजेन्डा बोकेर राष्ट्रनिर्मातालाई हिलो छ्याप्नेहरु कम्युनिष्ट होइनन, बाघको खोल ओढ्ने स्याल हुन
सामुहिक बलात्कार पछि १२ बर्षिया बालिकालाई मट्टितेल छर्केर आगो लगाइयो
सित्तैमा पाइने कण्डमबाट मानिसहरुले यस्तोसम्म काम गर्दा गरेछन्, अनुसन्धानपछि खुल्यो रहस्य
३० वर्ष देखि दाम्लोमै बाँधिएकी देवीमाया : यी हुन् संसारकै अभागी आमा (भिडियो)